Videos | Danya Wadi
By danyawadi April 17, 2020 Leaveacomment
By danyawadi March 6, 2020 Leaveacomment
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ ( RFA ) မြန်မာဌာန | သတင်းများ 2020-03-05 ငြိမ်းစုစီပုဒ်မ ၁၉ နဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား ၅ ယောက်ကို ရန်ကုန်မြို့ ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာ ရဲ တပ်ဖွဲ့တွေက မနေ့က လာရောက် ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ရခိုင်အရေး ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြလို့ သူတို့ကို ဖမ်းလိုက်တာပါ။ လင့်၊https://www.rfa.org/burmese/news/students-detained-for-rakhine-protest-03052020175738.html
By danyawadi March 2, 2020 Leaveacomment
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ ( RFA ) မြန်မာဌာန | သတင်းများ 2020-02-28 မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှာ သုံးနှစ်အတွင်းအဖမ်းခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ ၁၇၀၀ နီးပါးရှိတယ်လို့ RFA က သီးသန့်ဖတ် ခွင့်ရတဲ့ တပ်မတော် (ရေ) ရဲ့ လျှို့ဝှက်စာရင်းအရသိရပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလကနေ ၂ဝ၂ဝ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ လေးလအတွင်း မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားမပါလို့ ပြည်တွင်းမှာ အဖမ်းခံထား ရတဲ့သူ ၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အသက် (၁၈) နှစ်အောက်ကလေးတွေကို လူငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေ ပို့ထားတာ လည်း ရှိပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သူတို့ရဲ့မရေရာတဲ့ဘဝရှေ့ရေးတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတာများလာနေပြီလို့ အစိုးရအရာရှိ တွေေ ရာ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပါ ‌ထောက်ပြကြပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သူ မခက်မာတင်ပြထားပါတယ်။ လင့်၊https://www.rfa.org/burmese/program_2/rohingya-in-myanmar-02282020163619.html
By danyawadi February 26, 2020 Leaveacomment
Aljazeera 2020.02.26 British-Lebanese lawyer said she is delighted to represent the Rohingya before the International Court of Justice. The UN has described the Rohingya as the world’s most persecuted people [Ann Wang/Reuters] The Maldives has hired the services of prominent human rights lawyer Amal Clooney to represent the persecuted Rohingya at the United Nations court. […]
Aljazeera UP FRONT 22 Feb 2020 Aung San Suu Kyi’s former spokesperson Nyo Ohn Myint dismisses atrocities carried out against the Rohingya. In January the International Court of Justice ordered Myanmar to prevent the genocide of Rohingya Muslims in Rakhine state. Myanmar’s government rejected the ruling, saying it was based ona“distorted picture of […]